lundi, 08 janvier 2018 20:23
Vangaindrano: Mpianatra roa no maty
Vokatry ny fiakaran'ny rano noho ny ora-mikija, dia mpianatra roa vavy ao amin'ny CEG Sandravinany ao amin'ny CISCO Vangaindrano handeha hamonjy fodiana no namoy ny ainy ny Zoma 05 janoary lasa teo rehefa nivadika ny lakana nitondra azy ireo.
(Loharanom-baovao Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena)
lundi, 08 janvier 2018 19:47
Ivory Fianarantsoa: Andrasana ao amin'ny Faritra Haute Matsiatra izy 9 mianaka
Vokatry ny rotsakorana be omaly, dia nihotsaka tamin'ity trano nisy fiandrasam-paty ity ny tany, tokony taminn'y 9 ora alina ny alahady 07 janoary, Olon-dehibe 3 fa ny iray amin'io efa maty taloha satria niandry faty ireo olona ireo, tovolahy kely kosa ny 3, eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 taona eo. Ny telo sisa dia zazakely vao trotroina ny iray ary ny roa eo amin'ny iray taona sy tapany eo.
Tonga nanatitra sy nitondra ny zavatra ilaina toy ny formol sy lamba ny Minisitry ny fampianarana Ambony Rasoazananera Monique.
Amin'izao moa dia nangatahan'ny Chef de Région Haute Mahatsiatra ny hiaretana tory ireo Razana miisa 09 (sivy) ao ami FARITRA Haute Matsiatra.
lundi, 08 janvier 2018 19:26
Trump Tower USA: Nirehitra ny tranon'i Filoha
Nidonaka afo be io maraina io teo amin'ny tafotranon'ny bildina ben'i Filoha amerikanina Donald Trump aty New York, izay sady trano fonenany no birao fiasany rehefa aty New York ihany koa.
Vetivety dia nifamonjen'ny mpamono afo 100 ilay trano avo misy rihana miisa 58.
Tratra ara-potoana ny famonoana ny afo, ka hita fa nisy fahavoazana tao amin'ny fanafanana ny tranobe.
Nisy mpamonjy voina iray naratra nandritra ny famonjena, ny tao anaty trano kosa, tsy nisy naninona, i Donald Trump rahateo tsy tao tamin'io fotoana io, ary ireo zanany roa lahy ihany koa tsy nisy naninona.
Ity Trump Tower ity moa dia fananan'i Filoha amerikanina manokana.
lundi, 08 janvier 2018 19:24
Chutes Du Niagara: Nivadika gilasy
Noho ny hatsiaka mamely aty amin'ny sisintany manasaraka an'i Canada sy Etats-Unis, izay mahatratra -46°C, dia nivadika gilasy ilay Chutes du Niagara.
Ilay ranobe lasa ranomandry, tsy nahasakana tanteraka ilay rano 3000 tonnes isan-tsegaondra tsy hirotsaka ihany anefa izany.
Tsy nahasakana ireo mpizahatany anefa izany fa vao maika nanosika azy ireo andeha taty Ontario, satria dia 40 taona lasa no nisy izao tranga izao farany.
lundi, 08 janvier 2018 13:06
Toamasina: Manadio ny tanàna
Efa manomboka hita tsikelikely eny an-dalana nanomboka omaly ireo mpanadio ny tanàna. Ny rano efa nanomboka niverina tsikelikely koa nanomboka omaly alahady. Ny jiro efa hita misy mihanika ihany eny ambony poteau fa mbola tsy mandeha.
Efa misy fikambanana vitsivitsy ihany koa manampy ny Kaominina manala ny fako. Ny mpianatra misy vitsivitsy efa mianatra fa ny akamaroany mbola tsy mianatra araky ny fanapahan-kevitry ny DREN Toamasina.
Miteraka embouteillage tsy hay tantaraina ny fako eny amin'ny lalana. Mila miala adiny roa mialoha farafahakeliny raha handeha hizaha any amin'ny ville, tranga tsy fahita eto Toamasina.
lundi, 08 janvier 2018 12:57
Enseignement de base: Bilan destruction école par AVA
DREN touché : 6
CISCO touché : 19
Salle de classe entèrement detruite : 128
Salle de classe partiellement detruite : 209
lundi, 08 janvier 2018 12:45
Fampianarana: Miato ANTANIFOTSY - TOAMASINA I SY TOAMASINA II
Noho ny fiakaran'ny rano io maraina io dia tsy mianatra ihany koa ny mpianatra ao amin'ny CISCO ANTANIFOTSY ary ao amin'ny CISCO TOAMASINA I SY TOAMASINA II. Ho an'ireto farany dia amin'ny alarobia no miverina ny fampianarana.
lundi, 08 janvier 2018 12:16
La société Soavoanio qui fait la fierté de Sambava et toute la SAVA se remet de ses plaies causées par le cyclone Enawo en mars 2017. Soavoanio vise les 12 millions de noix de coco cette année, c’est notre objectif, dit le PDG Andreas Claude lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel An 2018, ce vendredi 05 janvier 2018 au Centre Soavoanio Sambava.
A Andreas Claude de continuer que Soavoanio s’attelle à la replantation des 20Ha ravagés par Enawo. La société se redresse et promise à un avenir optimiste.
lundi, 08 janvier 2018 11:51
Oniversiten'i Mahajanga: Tsy manaiky hiditra hianatra ny BDUM
Androany alatsinainy 8 janoary 2018 no daty nofaritana hidiran'ny oniversiten'i Mahajanga sy hiverenan'ny fampianarana rehetra taorian'ny savorovoro efa volana vitsivitsy izay.
Nisy ny fananganan-tsaina niarahana tamin'ny filohan'ny oniversite sy ny mpampianatra ary ny mpianatra rehetra teny amin'ny campus Ambondrona. Tonga teny ihany koa ireo mpianatra avy amin'ny BDUM (Bureau des étudiants de l' Université de Mahajanga) niaraka tamin'ny entana toy ny kidoro sy ny vilany nitaky ny hampidirana azy ireo amin'ny trano (bloc) mialohan'ny hiverenan'ny fampianarana. Nilanja sora-baventy izy ireo ary nanakana fidirana ny campus Ambondrona.
Sambava : Tovolahy 17 taona maty voatsatok’antsy
Tovolahy iray, antsoina Sylvano, no lasibatry ny andian-tanora mitam-piadiana androany tamin’ny iray ora maraina raha iny avy namonjy lanonana ka hody any an-trano ao Antanambao-Antaimby.
Naratra mafy ilay tovolahy voatsindrona zava-maranitra, nitolefika ary nameno ny arabe ny rà. Tsy tonga teny amin’ny hopitalibe Besopaka akory dia tapitra ny ainy.
Nokarohina ireo andian-tanora nahavanon-doza ka nisy iray voasambotra ary dia niharan'ny fitsaram-bahoaka.
Nitsongo dia hatrany Antsirabe Sambava ny Zandary fa mbola tafaporitsaka ny sasany raha vao nahatazana ny mpitandro filaminana.